MRTV-4 Channel Can Watch From Online Now | My Burmese Blog
MRTV-4 Channel Can Watch From Online Now	On August 28, 2007	by Htoo Tay Zar	With	32 Comments	- Myanmar news, Web	MRTV4ႏွင့္ ဆက္စပ္ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါၿပီ။ ယခု ေလာေလာဆယ္ beta version ပဲရွိပါေသးတယ္။ ၿမန္မာရုပ္သံေတြထဲမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးက MRTV4ပါ။ အဲဒီလိုင္းက တစ္ခုေကာင္းတာက သတင္းႏွင့္ ေၾကာ္ၿငာ မလာတာပါ။ တခ်ိဳ႕ အစီအစဥ္ေတြက လြဲရင္ အကုန္ၾကိဳက္ပါတယ္။ ၾကိဳက္တာက ဂစ္တာတီးသင္တဲ့ အစီအစဥ္လညး္ၾကိဳက္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကိုစိုင္း ႏွင့္ ႏိုင္ေဇာ္ (lazy club) တို႕က သင္တဲ့ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ေနာက္ Movie Mistakes အစီအစဥ္ ၾကိဳက္တယ္။ အဲဒီဆိုဒ္မွာ သံုးထားတာက Myanmar2Unicode ကို သံုးထားပါတယ္။
Share this:FacebookTwitterGooglePinterestPocketEmail	32 Comments	Songs from Beijing Olympics 2008 | My Burmese Blog
[…] လာေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ MRTV4မွာ ေတာင္ လာခဲ့ေသးတာပဲ။ ပိုုၿပီး […]
I would like to demand, to brocast again You Programmed last week about ” Air Accidence”, as I missed it. Others said it was very good. So Please.
Hello, I’m sorry this is not the Official Site Of MRTV 4. You’re requesting on wrong place. Anyway, Thanks for your comment.
Sorry, I am so sorry for my wrong message. I was trouble to you. Please tell me exactly website as you can, where I can send it. Good luck in everything!
Hello Sorry for late reply.. Here Official MRTV4web site http://www.mrtv4.net.mm
Thanks for givingagood new. I really want to watch Myanmar TV channel on online but it’s not available until now but we can watch it soon. I also like mrtv4 but not at all. But anyway, this isagood new for people who are living in abroad. Regard,
Thanksalot for your comment Bro, I hope MRTV4 will update daily/weekly.
Blog Analytics 2009 | My Burmese Blog
[…] အမွန္က ကြ်န္ေတာ္ေရးထားတာ MRTV4 Web Site အေၾကာင္းေရးထားတာပါ။ ဒါကိုု […]
Htuu Wai Oo
Hi….. I used to watch mrtv-4programmes & I like most of them.However, there’s one thing i’d would like to point out Pls tell Zin Aung & Mon Mon to slow down their speed when they have to say in English, especially in DJ Choice programme. I can’t understand at all what they r talking about. No intonation, No stress at all. when u speak english, it is unnecessary to be fluent but make sure of the pronunciation of the names of the actors, singers, titles and so on. I feel disappointing whenever I watch that programme. They r good presenters but they need to improve their English. Sorry to say!!!
Kaung Sett Lynn
mrtv4 ko may chin tar ka
Big Bag telepunk mhar sin pouk bar lol ma par tar lal
chein hoke ခ်ိန္ဟုတ္
how to download chines cartoon coming MRTV-4 at nearly 11:30
တီဗီ ကြော်ညာ တွေကို ဒေါင်းလွတ်ဆွဲချင်လို့.. ၀က်ဆိုဒ် လေးသိရင် လမ်းညွှန်ပေးပါ..
very boring MRTV
Why MRTV4 airing old & unpopular movies repeatedly!!!!!!!!!!!!
VJ choice ကို ညနေပိုင်းလောက် လာစေချင်ပါတယ်
ညမှောင်မှ လာတော့ အဲဒီ အစီအစဉ် ကို လွတ်လွတ်သွားတယ်
ြပြီးတော့ အသစ်လေးတွေ လာစေချင်တယ် ညထိစောင့်ပီး လာပီးသားဆိုတော့ အရမ်းစိတ်ညစ် သွားတယ်World Of Knowlage ကိုလဲစောစော လာစေချင်ပါတယ်
ko phyo zaw linn ကိုပြောပေးလို့် ရမလား၊သူ့ photo ရချင်လို့ တောင်းလို့ရမလားလို့။ရတယ်ဆိုရင် ပေးပါနော်။
််ိိိိိိိko zin aung ကို စကားနဲနဲ ပြောချင်တယ် …ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ ပြောပေးပါ ….
I want to talk phyo zaw lin .How can I do?Plz
MR TV4ကုိၾကဳိက္ပါတယ္အျမဲတမ္းလဲၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပ့မဲ့ MRTV4 ကုိဖြင့္ၾကည့္မယ္လုပ္တုိင္KOREA ၇ုပ္၇ွင္ပဲေတြ႕ေန၇တယ္ ဒါေၾကာင့္စိက္ညစ္ေန၇တယ္ ျမန္မာဇာက္လမ္းျဖစ္ျဖစ္တျခာႏုိင္ငံျခားဇာက္လမ္းေလေတြလုပ္ပါအုံးလုိ့ေျပာပါ၇ေစေနာ္ ေတာ္ၾကာေနMRTV4ကေန KOREATV4 ျဖစ္ေနမယ္ေနာ္။
very nice mrtv-4
Mrtv4 ရဲ့ အစီစဉ်တွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။
for tune lyrics အစီစဉ်ကို အရမ်းအားပေးချင်တယ်။ကျနော်တို့ပြည်ပ မှာမြန်မာပိုစ်မော်ဒန်ယဉ်ကျေးမူ တွေကိုအရမ်းကြိုက်ကျတယ်ဗျာ။
အဲဒီအစီစဉ်မှာ ပိုစ်မော်ဒန်စာသားတွေနဲ့ သီချင်တွေပါ၀င်နိုင်မှာလားဗျာ(ဥပမာ ဟန်ထူးလွင့် ရဲ no.33 )လို သီချင်းမျိူးတွေ ဒါမှမဟုတ် ဂီတာ သံကောင်းကောင်းနဲ့သီချင်တွေ ဗျာ။
I very watch MRTV-4 all program.I very wish to watching for tune lyrics program.How long I will wait?In here England,every body very like post modern art.In songs like as NO33 by Han Htoo Lwin like very much.Can I saw,like that songs at which program?
S’pore ka use lox ma ya woo lar ma thi woo?
mrtv-4 လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ…….. ၂-၁၂-၂၀၁၁။
mrtv-4 မှ နံနက်ပိုင်းလွှင့်ပေးသော တရားတော်အစီအစဉ်အား အလွန်ပင်သဘောကျပါသည်။ ဒါပေမဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မေတ္တာပို့အစီအစဉ်ပြီးရင် ၁ နာရီစာ ဆရာတော်များ၏တရားတော်များဆက်လက်လွှင့်ပေးလျှင်အလွန်ကောင်းပါမည်။ သို့သော်လည်း ဒီနေ့မနက် ၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်နေ့ ၀၆းဝဝ နာရီမှာ အဲလိုအစီအစဉ်ဖြစ်လာပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ၀န်ထမ်းတွေဆိုတော့ နံနက် ၀၅းဝဝ နာရီအတိမှာလွှင့်ပေးနိုင်လျှင်ပိုကောင်းပါမယ်.. ကျွန်တော့်တို့ အစိုးရဝန်ထမ်း ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ဖွဲ့ဟာ တရားတော်များကို တရားထိုင်ပြီး ကျင့်ခွက်ဖြင့်လိုက်နာပါသည်… တရားတော်များလွှင့်ချိန်က နံနက် ၀၅း၄၅-၀၆းဝဝ နာရီလောက်မှဆိုတော့ ရုံးသွားချိန်နောက်ကျနေပါသည်။ ဒါကြောင့် တရားတော်မဆုံးခင် ရုံးကိုသွားရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နံနက် ၀၅းဝဝ နာရီလွှင့်ပေးနိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပိုအကြိုးရှိနိုင်မည်ဟု ထင်ပါကြောင်း mrtv-4 မှ လူကြီးမင်းများအား တင်ပြအပ်ပါသည်။
နံနက်ပိုင်းတရားအစီအစဉ်အား ၀၅းဝဝ နာရီတွင်လွှင့်ပေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါမည်။ ကျွန်တော်တို့က ၀န်ထမ်းများဖြစ်သောကြောင့် အိမ်မှ နံနက် ၀၆းဝဝ နာရီထွက်ရပါသည်။